Maxaa sababay in haweenaydii baaraysay dagaalka Siiriya is casisho? - BBC News Somali
Maxaa sababay in haweenaydii baaraysay dagaalka Siiriya is casisho?
7 Agoosto 2017
Image caption Sawirka Carla Del Ponte
Carla Del Ponte ayaa sheegtay in ay dhowaan iska casili doonto gudiga caalamiga ah ee baaraya dembiyada ka dhacaya Siiriya. Waxayna go'aankeeda u sababaysay inaanay helin taageeradii ay uga baahnayd golaha ammaanka.
Iyada oo warbaahinta la hadlaysa ayay sheegtay in waraaqdii ay isku casili lahayd ay qortay isla markaana maalmaha soo socda ay gudbin doonto. Waxayna intaas ku dartay in golaha ay ka bixi doonto kadib marka ay isugu yimaadaan shirkooda soo socda kaasi oo dhici doonta bisha September ee sanadkan.
Haweenaydan oo u dhalatay dalka Switzerland ayaa sheegtay inaan cadaalad loo hayn Siiriya, golaha ammaankuna aanu waxba ka qaban arrintaas.
Haddii ay xilka banayso, waxaa shaqada kusoo haraya laba qof oo u kala dhashay Brazil iyo Maraykanka, kuwaasi oo u xilsaaran baaritaan ay ku sameeyaan dembiyada dagaal ee la galay mudadii uu socday dagaalka Siiriya.
Xilli ay jirto kala qaybsanaan baahsan oo ka dhex jirta golaha ammaanka, isla markaana wadamada Shiinaha iyo Ruushka ay dhowr jeer adeegsadeen diidmada qaxayan, ayaanay muuqan astaamo muujinaya in xaalada Siiriya loo gudbin doono maxkamada dembiyada adduunka.
Haweenaydayn ayaa kiiskan gacanta ku haysay tan iyo bishii Murch ee sanadkii 2011-kii, si ay u baaritaano ugu samayso tacadiyada ka dhanka ah aadanaha.